Raad Raac News Online – AMISOM oo shaacisay in ay wax ka qaban doonto amniga wadada isku xirta Muqdisho iyo Marko.
AMISOM oo shaacisay in ay wax ka qaban doonto amniga wadada isku xirta Muqdisho iyo Marko.
Faarax December 4, 2012 0
Saraakiisha Ciidamada Midowgga Africa ee AMISOM ayaa ku goodiyay in ay qaadi doonaan howlgal adag oo lagu sugayo Nabad-galyada wadada isku xirta Magaalooyinka Muqdisho iyo Marka.
Taliyahay ciidamada AMISOM Jen Andrew Gutti ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay in AMISOM ay qaadi doonto taaabo xoogan oo lagu sugayo amaanka wadada oo 2dii maalin ee la soo dhaafay lagu weeraray wafdi Wasiiro iyo Xildhibaano isugu jira oo Dowlada Soomaaliya ka tirsan.
Warkan ayaa lagu sheegay in AMISOM mudnaan siin doonto badbaadada shacabka Soomaaliyeed, waxaana sidoo kale warkan lagu cadeeyay in wax badan laga qaban doono Nabad-galyada wadadaasi isku xirta Gobolada Banaadir iyo Sh/hoose.
Jen Gutti waxaa uu warkan Qoraalka ku xusay inay AMISOM sii wadi doonto taageera dowladda Soomaaliya ee dhinac amaanka islamarkaana ay dadaal ugu jirto dhisida Ciidamada Dowlada Soomaaliya kuwaasi oo abuud buuxda u yeelan kara sidii looga takhalusi lahaa khatarta kooxda Al-Shabaab.
2dii Maalin ee ugu dambeeyay ayay aheyd markii wadada isku xirta Marka iyo Shalanbood Ururka Al-shabaab ay ku weerareen gadiid ay la socdeen Wadfi isugu jiray Wasiiro iyo Xildhibaano oo booqasho ku tagay Gobolkaasi Sh/hoose iyadoo qasaaro uu ka soo gaaray weerarkiaasi Ciidamada Dowladda ee ilaalada ka ahaa gadiidka Wafdigaasi.
Taliska AMISOM waxaa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgali doonaan nabad-galyada wadadaasi, soona Celin doono Amaanka isagoona ku hanjabay in ay ka hortagi doonaan weerarada ay inta badan ka geystaan Ururka Al-shabaab.